October 12, 2020 – Xorriya Online
Halbeegyada lagu qiimeeyo qofka doonaya kursi
Siyaasaddu waa cilmi u baahan barasho iyo waaya aragnimo la xiriirta u adeegida bulshada. Siyaasadu waa Mabda, Aragti iyo Akhlaaq ku dhisan qiyam, masuuliyad, xil-kasnimo iyo tayo hogaamineed oo heer-keedu sarreeyo. Ujeedka siyaasadu waa maareynta nolosha guud ee Aadanaha si uu Qof-kastaa u gaaro yoolkiisa nololeed, Bulshaduna ugu wada noolaato cadaalad, nabad, horumar, iskaashi iyo […]
kufsi waa jiraa laakiin uma jiro sida loo sheegayo…
Dad badan oo aan ogeyn xaqiiqda ka dambeyso Kufsiga ayaa qeyb weyn ka qaadanayo in la waayo arday xaadirta dugsiyada Qur’aanka iyo goobaha kale ee diinta lagu barto. Maalin kasto, waxaa isoo gaarta warbixin sheegeysa in la kufsaday Gabar yar oo arday dugsi ah ama in la faro xumeeyay wiil arday ah waxaana falalkaas la […]
Nin barafasoor ah iyo ardaygiisii oo meel kayn ah maja-baxsanaya ayaa waxa ay arkeen nin faqiir ah oo xaabo guranaya kabihiisina iska siibay oo meel dhigtay. ardaygii ayaa yiri macallin waxaan ku maddadaaloono ayaan inoo hayaa ka warran haddaan ninkaas kabaha ka qarinno ka dibna ka dhuummano dushana ka eegno bal waxa uu sameeyo marka […]
La taliyihii ra’iisul wasaare Rooble oo is casilay
La taliyihii gaarka ahaa ee Xariiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Xariir Baaruud ayaa shaaciyay inuu isaga tegay shaqadii uu ka hayay xafiiska ra’iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble. Cabdi Xariir Baaruud oo kamid ahaa xubnihii sida gaarka ula shaqeynayay ra’iisul wasaarihii hore shaqada looga eryay dhamaadkii bishii July ee sanadkan Xasan Cali […]
Warar Alshabaab ay ku baahiyan barahooda interneedka ayeey ku sheegeyn in iska hor imaad xoogan uu ciidamo ka tirsan dowladda iyo cutubyo ka tirsan Alshabaab ku dhexmaray qeybo ka mid gobolka Hiiran. Al Shabaab ayaana sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda kuwa kalana ay gacanata ku dhigeen. Walow aan la […]
Toogasho ka dhacday gudaha suuqa bakaaraha
Askari ka tirsanaa ciidamadda dowladda federaalka Somaaliya ayaa warar soo baxaya sheegayaan in barqanimadii maanta lagu dilay gudaha suuqa bakaaraha ee Magaaladda Muqdisho. Dilkaan ayaa ka dhacay qeybta dharka lagu iibiyo ee Suuqa bakaraha waxaana geystay dhalinyaro bastooladdo ku hubeysnaa. Goobjoogaha ayaa sidoo kale sheegay in ragga hubeysnaa ay goobta ka baxsadeen,islamarkaana meydka askariga goobta […]
Ra’iisul wasaare Rooble oo kulan gaar ah la yeeshay safiirka midowga Yurub Ee Soomaaliya
Ra’iisul Wasaaraha jamhuuriyada federaalka Soomaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa maanta Ku qaabilay safiirka midowga yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlange. Ra’iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in uu wadahal miro dhal ah la yeeshay safiirka midowga yurub ee Soomaaliya isagoona tilmaamay in ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga midowga Yurub ee […]
Madaxweyne Farmaajo “Shacabka Soomaaliyeed ha u midoobaan la dagaalanka Al Shabaab”
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta calanka ee 12-ka Oktoobar ayaa Alle naxariis u weydiiyey dhammaan halyeeyadii naftooda u hurey jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, iyaga oo meel uga soo wada jeesanaya Al […]
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa ay xukun ku riday laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo lagu qabtay dagaal ka dhacay degmada Deeyniile. Xasan Cabdi Aadan Nuur & Cumar Xuseen Abshir Jaabir ayaa loo haystaa kamid ahaanshiyaha Alshabaab gaar ahaan in ay ahaayeen Sarkaal iyo Darawalkiisa si gaar ah uga […]
Maanta oo kale 12 oktober sanad walba waxaa gayiga soomaaliya laga xusaa maalinta calanka soomaaliyeed, waana astaanta keliyah ee leesku raacay min raas-caseyr ilaa iyo raas kambooni. Sanad guuradaan oo ku beegan sanad guuradii 66-aad ayaa ah maalin ku wayn quluubta shacbiga Soomaaliyeed, waa maalintii la go’aamiyay nooca uu noqonayo calanka Soomaaliya. 12-kii Oktober 1954-kii ayaa […]